ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီတွင် video conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၃၆)ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၊ (၃၆)ကြိမ်မြောက်အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံခေါင်းဆောင်များ၏ အထူးအစည်းအဝေးတို့သို့ နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
(၃၆)ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ဗီယက်နမ် ရိုးရာအနုပညာအကများဖြင့် ဦးစွာ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပြီးနောက် အာဆီယံ၏ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Mr. Nguyen Xuan Phuc က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြား၍ (၃၆)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီး အစည်းအဝေးကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နံနက် ၈ နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် ကျင်းပသည့် (၃၆)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ ပါဝင်တက်ရောက်သည်။ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ် Mr. Nguyen Xuan Phuc က သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး၊ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ခေါင်းဆောင်များနှင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံခေါင်းဆောင်များက အာဆီယံအသိုက်အဝန်းတည်ဆောက်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ အာဆီယံ၏ပြင်ပဆက်ဆံရေး၊ အာဆီယံ၏အချက်အချာကျမှု ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဒေသတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာရေးရာကိစ္စရပ်များအပေါ် ဆွေးနွေးအမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က အာဆီယံအနေဖြင့် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ၏ စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေချိန်တွင် ယခုနှစ် အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ၏ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သော “စည်းလုံးညီညွှတ်၍ တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရှိသော အာဆီယံ” သည် ယနေ့အချိန်အခါ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် အလွန်ပင် သင့်လျော်ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း၊ မဖြေရှင်းနိုင်သေးသည့် ဒေသတွင်းပြဿနာများနှင့် အင်အားကြီးနိုင်ငံများအကြား တင်းမာမှုနှင့် ပြိုင်ဆိုင်မှု မြင့်တက်လာခြင်းတို့ကလည်း ဒေသ၏အခင်းအကျင်းကို မတည်မငြိမ် ဖြစ်စေကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ အာဆီယံ၏ စည်းလုံးညီညွှတ်မှု၊ အာဆီယံ၏ အချက်အချာကျမှုနှင့် ပြောင်းလဲနေသည့် ဒေသတွင်းဗိသုကာ ပုံစံတွင် အဓိကမောင်းနှင်အား အဖြစ် ပါဝင်သည့် အာဆီယံ၏ အခန်းကဏ္ဍတို့မှာ ယခုအချိန်တွင် ပိုမိုအရေးကြီးလာကြောင်း၊ အာဆီယံအနေဖြင့် ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးတက်ခိုင်မာစေရန် ၊ ပြင်ပမိတ်ဖက်နိုင်ငံများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပိုမိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် အာဆီယံ၏ စည်းလုံးညီညွှတ်မှုနှင့် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းထူထောင်ရေးကြိုးပမ်းမှုတို့ကို အပြုသဘောဖြင့် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် အလားအလာရှိသောမိတ်ဖက်နိုင်ငံများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနှင့် ပေါင်းစပ်ဆက်သွယ်ရေးမှာ များစွာထိခိုက်သည်ဖြစ်ရာ ကူးစက်ရောဂါ၏ ထိခိုက်နစ်နာမှုများမှ ပြန်လည်နာလန်ထူနိုင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို တိုးတက်ခိုင်မာစေရန် အထူးပင် လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ အာဆီယံအနေဖြင့် ကူးစက်ရောဂါတုံ့ပြန်ရေးနှင့် ပြန်လည်နာလန်ထူရေးဆိုင်ရာ ထိရောက်ကျယ်ပြန့်သည့် အစီအစဉ်တစ်ရပ် ရေးဆွဲချမှတ်ခြင်းကို အရှိန်အဟုန် မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ အလားတူ အာဆီယံအနေဖြင့် ပြည်သူများ၏ ယုံကြည်မှု၊ကျန်းမာရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တို့ကို ပြန်လည်တည်ဆောက် မြှင့်တင်ရန် အရေးကြီးကြောင်းနှင့် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့် မိမိတို့သည် ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးဘက်သို့ အလျင်အမြန် ကူးပြောင်းနေသည်ဖြစ်ရာ အာဆီယံအနေဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်မှု ၄.၀ တို့နှင့် ကျင့်သားရ၍ အသားကျနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကို အပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ရခိုင်အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်၏ ဆွေးနွေးချက်အပေါ် တုံ့ပြန်ပြောကြားရာ၌ ရခိုင်ပြည်နယ်၏အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း၊ မိမိတို့ဒေသအတွင်း သဟဇာတရှိမှုနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု အလွန် လိုအပ်လျက်ရှိသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှု ရှိကြောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးသည် လူသားအချင်းချင်းအကြား ကောင်းမွန်သည့် ဆက်ဆံရေး၊ အပြန်အလှန် လေးစားမှုနှင့် အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုတို့အပေါ်တွင် အခြေခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အာဆီယံတွင် ဤတန်ဖိုးစံနှုန်းများ ရှိသည်ဖြစ်ရာ မိမိတို့ တစ်နိုင်ငံတည်းကိုသာမက ဒေသတွင်းကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ပြဿနာကိုဖြစ်စေ၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ပြဿနာကိုဖြစ်စေ၊ မိမိတို့အနေဖြင့် အတူတကွ ပူးပေါင်း၍ အဖြေရှာနိုင်ကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် လူကုန်ကူးမှု ပြဿနာ တို့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မိမိတို့ လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသည့် အန္တရာယ်နှစ်ခု ဖြစ်သကဲ့သို့ ယင်းပြဿနာနှစ်ရပ်မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ခြိမ်းခြောက်နေသည့် ပြဿနာများ ဖြစ်ကြောင်း၊ အာဆီယံအနေဖြင့် ယင်းပြဿနာများကို မိမိတို့ဒေသတစ်ခုတည်းအတွက်သာမက တစ်ကမ္ဘာလုံး၏ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် သဟဇာတဖြစ်မှုကို တိုးမြှင့်နိုင်စေမည့် အပြုသဘောဆောင်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် အတူတစ်ကွ ပူးပေါင်းဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ကျင်းပသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင် အမျိုးသမီးများ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံခေါင်းဆောင်များ၏ အထူးအစည်းအဝေးသို့ ပါဝင်တက်ရောက်သည်။ အထူးအစည်းအဝေးတွင် ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ် Mr. Nguyen Xuan Phuc က သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး၊ အစည်းအဝေးသို့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ခေါင်းဆောင်များ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် Mme. Jacinda Ardern ၊ ဗီယက်နမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဌ Mme. Nguyen Thi Kim Ngan ၊ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) ၏ အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး Mme. Armida Salshiah Alisjahbana နှင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူး ချုပ်တို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
အထူးအစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ရာ၌ သက်ဆိုင်သူ အားလုံးပါဝင်ပြီး ကျား-မ သာတူညီမျှမှုရှိသည့် အသိုက်အဝန်းကို ဖော်ဆောင်ရာတွင် မိမိတို့ အနေဖြင့် လမ်းပြမြေပုံအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည့် “ASEAN Declaration on Gender-Responsive Implementation of the ASEAN Community Vision 2025 and Sustainable Development” ကို အပြည့်အဝနှင့် ထိထိရောက်ရောက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ထို့အတူ ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာအခွင့်အလမ်းများကို အသုံးပြု၍ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင် ရည်မြှင့်တင်ရေးအတွက် မိမိတို့၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ရန် အရေးကြီးကြောင်း နှင့် ကူးစက်ရောဂါအလွန် အာဆီယံ၏ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး စီမံချက်တစ်ရပ် ရေးဆွဲချမှတ်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုဖော်ဆောင်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးထား ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က အာဆီယံအနေဖြင့် ကျား-မသာတူညီမျှမှုကို ဖော်ဆောင်နိုင်မည်ဆိုလျှင် သက္ကရာဇ် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် ဂျီဒီပီကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၈ ထရီလျံ ပိုမိုတိုးမြှင့်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ဆန်းစစ်လေ့လာမှုတစ်ခုက သုံးသပ်ခန့်မှန်းထားကြောင်း၊ ဤသို့သော အလားအလာကောင်းများကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် သာယာဝပြောရေးကို ကာကွယ်မြှင့်တင်ပေးရန်၊ အမျိုးသမီးများ၏အခွင့်အရေးကို လေးစားရန်နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အသံကို ပိုမိုအလေးထားနားထောင်ရန် အရေးကြီးကြောင်း ၊ သို့မှသာ အာဆီယံအနေဖြင့် COVID-19 ၏ စိန်ခေါ်မှုမှ လွတ်မြောက်ပြီး၊ ဒေသနှင့်နိုင်ငံတကာ၏ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် စည်ပင်ဝပြောမှုတို့အတွက် အမျိုးသမီးများ၏အရင်းအမြစ်များကို ပိုမိုအားပြုနိုင်မည့် ကျား-မ သာတူ ညီမျှမှု ပိုရှိသော အသိုက်အဝန်းတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွန်းလာမည်ဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
(၃၆)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့်အတူ အာဆီယံခေါင်းဆောင်များနှင့် အာဆီယံပါလီမန်ညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ်များ၏တွေ့ဆုံပွဲ၊ အာဆီယံခေါင်းဆောင်များနှင့် အာဆီယံ လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ တွေ့ဆုံပွဲနှင့် အာဆီယံခေါင်းဆောင်များနှင့် အာဆီယံစီးပွားရေး အကြံပေးကောင်စီမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၏တွေ့ဆုံပွဲတို့ကိုလည်း video conferencing စနစ်ဖြင့် ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့သည်။
အာဆီယံခေါင်းဆောင်များနှင့် အာဆီယံပါလီမန်ညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ တွေ့ဆုံပွဲ၌ အာဆီယံ၏ လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ် Mr. Nguyen Xuan Phuc နှင့် AIPA-41 ၏ လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဗီယက်နမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ Mme. Nguyen Thi Kim Ngan တို့က ဦးဆောင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ အာဆီယံပါလီမန်များ ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စား ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက ဉီးတီခွန်မြတ် ပါဝင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
(၃၆)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် (၃၆)ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီး အစည်းအဝေးဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြေညာချက်၊ စည်းလုံးညီညွတ်၍ တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရှိသော အာဆီယံဆိုင်ရာ အာဆီယံခေါင်းဆောင်များ၏ မျှော်မှန်းချက် (ASEAN Leaders’ Vision Statement ona“Cohesive and Responsive ASEAN”) နှင့် ပြောင်းလဲနေသည့် ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားရေးရာ ကဏ္ဍတွင် လူ့သားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံကြေညာချက် (ASEAN Declaration on Human Resource Development for the Changing World of Work) စသည်တို့ အပါအဝင် စာရွက်စာတမ်း (documents) (၁၅)ခု ကို ထုတ်ပြန်၊ အတည်ပြု၊ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
(၃၆)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံခေါင်းဆောင်များ၏ အထူးအစည်းအဝေးတို့ တွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဉီးသောင်းထွန်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဉီးကျော်တင်တို့လည်း ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရသည်။